အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): မိနှင်း
ကျနော်အကို တစ်ယောက် သင်္ဘောမှာ မထမတန်း အရာရှိ(Chief Officer) ဖြစ်တော့ အသက်က ၃၀ ရောက်ပြီ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကရှိနေတော့ သင်္ဘောသားဖြစ်ကတည်းက လိုက်ရတဲ့ သင်္ဘော၊ ကုန်းပေါ်အများဆုံးနေရမှ ၃ လလောက်ပဲ၊ သင်္ဘောအရာရှိဖြစ်တော့ ညီဖြစ်တဲ့ကျနော်ကပဲ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတွေနဲ့ တွေ့ပေးပြီး လှော်ပေးလိုက်တာ သူငယ်ချင်းထဲက မိနှင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျလေရော၊ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ကွန်ဒိုတစ်ခုမှာ အခန်းဝယ်လို့ သီးသန့်နေကြတယ်လေ၊ အကိုနဲ့ ယူလိုက်လို့ မရီးသာဖြစ်လာတယ်၊ ကျနော်တို့က သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ပေါင်းသင်းခဲ့တာကြာခဲ့တော့၊ မရီးလို လေးစားကြည့်လို့ကို မရ၊ သူက ပြောင်သလိုနောက်သလိုနဲ့ ကျနော်ကို လာဟောက်သေးတာ ကျနော်ကလဲ ဂရုမစိုက်၊
အကို သင်္ဘောက ပြန်ဆင်းလာပြီး ရန်ကုန်မှာ နားနေတဲ့ အချိန်ဆိုလဲ ကျနော်က သူတို့အိမ်ကို အဝင်အထွက်မပျက်၊ အမေအိမ်မှာ အိပ်လိုက် သူတို့အိမ်မှာ သွားအိပ်လိုက်နဲ့၊ အထူးသဖြင့် အရက်သောက်ပြီးရင် အကိုတို့အိမ်မှာ အိပ်ခန်းပိုတွေက ရှိနေတော့ ဝင်ခွေနေရော၊ အကိုအလဲ အိမ်မှာ လူအေး၊ အိမ်မှာရှိနေရင် စာအုပ်တွေဖက်ပြီး တစ်ယောက်ထဲ ငြိမ့်နေတတ်တာ၊ ကျနော်ကိုလဲ သူ့ထက်အငယ်ဆိုတော့ ဘာမှမပြော၊ သူ့မိန်းမနဲ့ ကျနော်ကလဲ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ ကျနော်ကတော့ အိမ်ကို ဝင်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိုထွက်၊ အိမ်သော့ အပိုတစ်ချောင်းတောင် ကျနော်ကို ပေးထားရတဲ့အထိပဲ၊ သင်္ဘောပြန်တက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ အကိုက ကျနော်ကို အထူးမှာတယ်၊ သူ့မိန်းမကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ရယ် အိမ်မှာ သွားနေပေးဖို့ရယ်ပေါ့၊ ကျနော်စိတ်ထဲ အကိုရဲ့ အိမ်ထက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်လို့သာ စိတ်ထဲမှာ ထင်နေမိခဲ့တယ်၊
ဒီကောင်မကလဲ အိမ်ထောင်ကျတော့မှာ အနေအထိုင်ကလဲ ပိုပတ်စက်လာတယ်၊ သူတို့ အိမ်ထဲ ကျနော်ရှိနေတာတောင် နို့နှစ်လုံး တရမ်းရမ်းနဲ့ အတွင်းခံမဝတ်ပဲနေတတ်တာ၊ သူငယ်ချင်းဘဝတုန်းက အပေါ်ယံလောက်ပဲ တွေ့ဖူးခဲ့တာ၊ အခုတော့ နှိ့နှစ်လုံးကိုလဲ အင်္ကျီလည်ပင်းပေါက်ထဲကလည်း မြင်ဖူးခဲ့ရပြီ၊ အောက်စလွတ်နေတာလဲ အခါခါရယ်၊ အစ်ကိုရှိနေတုန်းက ပုံစံအတိုင်းပဲ၊ အကိုက အရာရှိဖြစ်လာတော့ ၆ လတစ်ခါလောက် ပြန်လာတတ်တယ်၊ ၂ လလောက်နားပြီးရင် ပြန်တက်ရရော၊ သူ့ယောင်္ကျား ကျနော်အစ်ကို မရှိရင် အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်းနေရတာ ပျင်းလို့ဆိုပြီး ကျနော်သွားတဲ့နေရာတွေ လျှောက်လိုက်ချင်နေတာ၊ ကျနော်ကတော့ မခေါ်ဖူး၊ သူက သူငယ်ချင်းဆိုပေမယ့် အရင်လိုမှမဟုတ်တာ၊ အိမ်ထောင်သည်လေ၊ နောက်ပြီး ကျနော်တို့က အသက်တူတွေဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲ သတိထားရသေးတာ၊
ဒီလိုနဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကြာတော့ သူတို့လင်မယား ခလေးကလဲမရသေး၊ မိနှင်းကလဲ အပျိုလုပ်ကောင်းတုန်း၊ ကျနော်လဲ မိနှင်းကို မျက်စိနောက်လာတော့ "နင်တို့လင်မယား ခလေးမယူသေးဘဲ ဘာလုပ်နေကြတာတုန်း" လို့မေးလိုက်တော့ "ဟဲ့ကောင် ခလေးက မရသေးတာဟ…ငါလည်း ဘာမှ တားမထား…နင်အကိုလည်း ပြန်ရောက်တဲ့ နှစ်လလုံးကြိုးစားတာပဲ….လူလည်း လျှာကိုထွက်ရောပဲ" လို့ ပြန်အော်တာပေါ့၊ ကျနော်လည်း ရယ်ချင်စိတ်ကဖြစ်သွားပြီး "နင်တို့က အပေါက်ရော တည့်အောင်လုပ်ကြရဲ့လား" ပြန်အော်ပြီး ကျနော်လည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘီယာသောက်ဖို့ လစ်သွားရော၊ အိမ်ခန်းတံခါးကို မိနှင်းက လိုက်ပိတ်ရင်း "မသာကောင် နင်ညပြန်လာရင် ဘယ်အပေါက်ကို နင့်အကိုလုပ်လည်း ပြမယ်" လို ပြန်ခံပက်တာပေါ့၊ ကျနော်လဲ တစ်ဟားဟား နဲ့ ရယ်ရင်း အပြင်ထွက်သွားခဲ့တယ်လေ၊
ဒီလိုတွေ ပြောကြတာကတော့ ကျနော်တို့တွေမှာ မထူခြားဘူး၊ သူငယ်ချင်းတွေ ဘဝကတည်းက လစ်လို့ကတော့ အချင်းချင်းက ဆော်နေကြလေ၊ ညရောက်တော့ ၁၀ နာရီလောက်မှာ ကျနော်အိမ်ပြန်လာတယ်၊ ဘီယာသောက်ရတာလဲ ဒီနေ့ပိုပြီး ခါးနေသလိုလို၊ အတူသောက်တဲ့ ဝိုင်းထဲ အရက်သောက်တဲ့ သူကရှိနေတော့ ကျနော် အပေါ့သွားတုန်း ဟိုကောင်တွေ ကျနော်ဘီယာခွက်ထဲ အရက်တွေများ ရောထားသလားမသိ၊ ကျနော်တို့ အချင်းချင်းကလဲ သိပ်စိတ်မချရ လစ်ရင် တီးကြတာပဲ၊ တစ်ခါတလေ ချိန်းတာနောက်ကျရင် အရက်ကို ရေမရောရပဲ နှစ်ခွက်လောက် အပြစ်ပေးတဲ့ သဘောနဲ့ သောက်ရသေးတာ၊ အခုတော့ အတော်ကို မူးနေတယ်၊ အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ခြေထောက်တွေကိုတည့်နေအောင် ကြိုးစားပြီး လမ်းလျှောက်နေသော်လည်း ကိုယ်ဟာကို ပြန်သိနေတယ် တစ်လမ်းလုံးပြည့်နေတော့မှာ၊
အိမ်ရာဝင်း ဂိတ်ပေါက်ရောက်တော့ လုံခြုံရေး ငနဲက စော်ကားမော်ကားပြောသေးတာ "ဆရာ လိုက်ပို့ရမလား" တဲ့၊ လမ်းပေါ်က အလေနတ်တော့ ခွေးက မခန့်လေးစားနဲ့ နေ့တိုင်းတွေ့ဖူးနေတဲ့လူကို ထဟောင်သေးတယ်၊ ခွေးလဲ ဟောင်မှာပေါ့ သူထမဟောင်ရင် ကျနော် ခွေးကိုတက်နင်းမိတော့မှာ၊ ကွန်ဒိုအောက်ရောက်တော့ ရှိနေတဲ့ လုံခြုံရေးဘဲကို ဂျိုကြည့် ကြည့်လိုက်သေးတာ၊ အောင်မယ် ဒီကောင် စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ဓာတ်လှေခါးခလုပ်ကို ပြေးနှိပ်ပေးတယ်၊ နံပါတ် ၁၀ ခလုပ်ကိုနှိပ် အပေါ်လဲတက်ရော ခေါင်းထဲမှာ တရိပ်ရိပ်နဲ့ဗျာ၊ ပိုတောင် မူးလားသလားမသိ ဘေးက တန်းကိုကိုင်ထားရင်း အတော်ထိန်းနေရတယ်၊ ရောက်ပြီး အပြင်ထွက်လိုက်ပြီး အခန်းကိုရောက်အောင် တစ်ခြားသူတွေရဲ့ အခန်းတွေကို ခြေသံလုံအောင် ထိန်းလို့လျှောက် အမြန်လစ်တာပေါ့၊ ကျနော် ခွေးလိုနွားလို အရက်မူးနေတာ လူသိရင်ရှက်စရာ၊
အခန်းဝရောက်တော့ သော့တံနဲ့ သော့ပေါက်ကို ထိုးနေတာ တော်တော်နဲ့ မတည့် သော့ခလောက်က တံခါးကို ထိမိပြီး အသံပဲထွက်နေတော့တာ၊ ခဏနေတော့ မိနှင်းက မှန်ဘီလူးပေါက်ကနေ လာချောင်းကြည့်ပြီး တံခါးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့ အိမ်ထဲရောက်သွားပြီး မိနှင်းကို "ငါမမူးသေးဘူး တံခါးဖွင့်နိုင်သေးတယ်" လို့ပြောလိုက်တော့ "နင်အတော်မူးနေတာပဲ" လို့ ချီးကျူးစကားပြောတော့တာလေ၊ စပြီ ကိုယ်ကမရစ်ရ သူစရစ်တော့မယ်၊ ကျနော်လဲ ပေကပ်ပြီး "မမူးသေးဘူးဟေ့….နင်တို့လို လူမလုပ်နိုင်သေးတဲ့ သူတွေအတွက် သင်တန်းပို့ချနိုင်သေးတယ်" လို့ပြောရင် ထိုင်ချလိုက်တာ ခုံပေါ်မရောက် ကြမ်းပြင်ပေါ်က ကော်ဇောပေါ် ရောက်သွားရော၊
နောက်တော့ မိနှင်းက "ထမင်းစားဦးမလား..ငါလဲ ဗိုက်ဆာနေပြီ… တစ်ယောက်တည်း စားရမှာ ပျင်းလို့ နင့်ကိုစောင့်နေတာ" လို့ပြောတော့ ကျနော်ခေါင်းငြိမ့် ပြလိုက်တာပေါ့၊ ကျနော်မတ်တပ် ပြန်ထတာတော်တော်နဲ့ မရ၊ မိနှင်းက ပွစိပွစိပြောရင်း လာထူတော့မှ ရပ်နိုင်တော့တယ်၊ ကျနော်လက်မောင်းကို သူထိန်းပေးရင် ထမင်းစားခန်းရောက်လာပြီး အသင့်ခူးပေးထားတဲ့ ထမင်းပန်ကန်က ဇွန်းနဲ့ ခရင်းကိုကိုင်လို့ စပြီး စားတော့ "ဟဲ့ ထမင်းကို ပါးစပ်ပေါက် တည့်အောင်ထည့်နော် အပေါက်မှားနေရင် ဗိုက်မဝပဲ ဖြစ်နေတော့မှာ" လို့ ပြန်ရိတော့တာ၊ နာချင်နေပြီ၊ "ကဲ ကြည့်စမ်း ငါကတော့ မီးမှိတ်ထားလဲ တည့်တည့်ပဲ" လို့ ပြောရင်း ထမင်းစားနေတာပေါ့၊ သူကတော့ ပြုံးစိစိနဲ့ရယ်၊ ထမင်းစားပြီးတော့ ကျနော် ဧည့်ခန်းက ကော်ဇော်ပေါ်မှာ သွားပြီး လှဲပြီးလိုက်ပြီး သတင်းလိုင်းတစ်လိုင်းကို ကြည့်နေတာပေါ့၊
ခဏနေတော့ မိနှင်းလဲ ထမင်းစားခန်းကထွက်လာပြီး ကျနော်နဲ့ မလှမ်းမကမ်း ကော်ဇော်ပေါ်မှာ ထိုင်ရင်းတီဗီကြည့်နေတယ်လေ၊ ကျနော်လဲ စကားပြောမလို့ သူဖက်လှည့်လိုက်တော့ မူးနေတာတွေပျောက်သွားပြီး မျက်စိက ကျယ်သွားတယ်၊ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဒူးထောင်လို့ ထိုင်နေတာ ဝတ်ထားတဲ့ ဂါဝန်အောက်စက လွတ်နေပြီး ပေါင်တံဖြူဖြူကြားမှာ အမွှေးမဲမဲနဲ့ ဖုတ်ဖုတ်ကြီး၊ ကျနော်လဲ ပြောမယ့် စကားတွေမေ့သွားပြီး "ဓာတ်ပုံတွေ ထွက်လာရင် ငါ့ကိုလာပေး" လို့ ပြောလိုက်တော့ မိနှင်းက ရုတ်တရက် မသိ၊ "ဟဲ့ ဘာပြောတာလဲ" လို့ ပြန်မေးတော့ ကျနော်လဲ သူ့ပေါင်ကြားနေရာကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်မိတာ၊ မိနှင်းက ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ ပြင်ထိုင်လိုက်ပြီး "မူးတော့ မူးတယ်…ဒါမျိုးကျ မြင်တတ်တယ်" လို့ပြန်ပြောရင်း အိပ်ခန်းထဲကို ထွက်ပြေးသွားလေရော၊ ကျနော်လဲ သတင်းကြည့်နေရင်း အိမ်ရှေ့ခန်းမှာတင် အိပ်ပျော်သွားတယ်၊ အိမ်မက်ထဲမှာတောင် ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ နှစ်ပါးဂဟေဆက် ဖီးလ်တွေတက်လို့ လိင်ကိစ္စကို ပြုကျင့်နေကြတာပေါ့၊ ဝတ်မှုံရွှေရည်က ကျနော်အပေါ်ကိုတက်ထိုင်ပြီး ရင်ဘတ်ကို သူ့လက်နဲ့ ထောက် မြင်းစီးသလိုလုပ်နေတုန်း မိနှင်းကလဲ ကျနော်ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ ပွတ်လှုပ်ပြီး လားနှိုးတော့ ကျနော်လည်းနိုးသွားခဲ့ရတယ်၊ "ကောင်းခန်းရောက်မှာကွာ…ဖီးလ်ငုပ်တယ် မိနှင်းရာ" လို့ပြောမိတော့ မိနှင်းက "သိတယ်ဟေ့….ဧည့်ခန်းထဲမှာ နင့်ဟာကြီးက ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေလို့….အိပ်ခန်းထဲသွားအိပ်" လို့ပြောတော့တာ၊ နာရီကြည့်မိတော့ ည ၁၁ နာရီကျော်နေပြီ၊ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ အခန်းထဲကို မသွားသေးဘဲ တီဗီကို ဆက်ပြီထိုင်ကြည့်နေသေးတာ၊
မနှင်းကလဲ မအိပ်သေးဘဲ ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း "ယောင်္ကျားကို လွမ်းလိုက်တာ" လို့ စပြောလေရော၊ "နင်တို့ပေးစားလို့သာ ယူခဲ့ရတာ… သင်္ဘောသားမယား ဖြစ်ရတာ လွမ်းလို့သေတော့မယ်" တဲ့၊ "ဟိုက်….မိနှင်းတစ်ယောက်တော့ ရစ်ပြီ…….နင်လဲကြိုက်လို့ ယူခဲ့တာလေ အခုမှာ လာရစ်မနေနဲ့" လို့ ကျနော်ကပြန်ပြောမိတော့ "ရစ်တာမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဟာ…. ညဆို အိပ်ရာထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ ငေါင်းစင်းစင်း ဟာတာတာနဲ့ အိပ်လို့ကို မပျော်လို့ပါ" တဲ့၊ စိတ်လေတယ် ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ၊ သူငယ်ချင်းလို ပြောရမလား မရီးတစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး စကားပြောရမလားမသိ၊ အတော်ဂွကျတဲ့ အနေအထား၊ "အိပ်ဆေးသောက်အိပ်ဟာ" လို့ပြောလိုက်တော့ မိနှင်းက အထွန့်တက်ပြီး "ရဘူးဟ စိတ်က အိပ်ပျော်ချင်တာမဟုတ် တစ်ယောက်ထဲ အိပ်ရတာကို ပျင်းနေတာ" လို့ လျှာပြန်ရှည်နေတော့ ကျနော်လဲ အမြင်ကပ်လာပြီး "ငါ့နဲ့ လာအိပ်ဟာ" လို့ တလွဲကြီး ပြောပစ်လိုက်မိရော၊
ဆက်ပြောနေရရင် ဧည့်ခန်းထဲ ဆင်းရဲသားကားတွေ ရိုက်ဖြစ်တော့မယ် ကျနော်လဲ ထထွက်သွားပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ဝင်ခဲ့တော့တယ်၊ သူကတော့ သူ့စကားအတိုင်း ငေါင်းစင်းစင်းနဲ့ ဧည့်ခန်းမှာ ကျန်ခဲ့ပါလေရော၊ အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ ကျနော်လဲ သွားတိုက် မျက်နှာသစ် ညဝတ်အင်္ကျီလဲဝတ်နေတုန်း မိနှင်းတစ်ယေက် အခန်းတံခါးဖွင့်လို့ ဝင်လိုက်လာပြန်ရော၊ "အိပ်ပါနဲ့ဦးဟာ စကားပြောရအောင် ငါပျင်းလို့ပါ" တဲ့၊ စပြီ သူငယ်ချင်းဘဝတုန်းက ဂျစ်ကျတဲ့ အကျင့်တွေနဲ့ ကျနော်ကို နှိပ်စက်တော့မယ်၊ "နင်ရော ရည်းစားမရသေးဘူးလား" တဲ့၊ လုပ်ပြီ မစွံသေးတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို စပြီးစော်ကားပြီ၊ "ရသေးဘူး…ငါ့ကို ကြိုက်မယ်လူ မရှိ နင်သိရဲ့ သားနဲ့ လာမေးမနေနဲ့" လို့ ပြောမိတယ်၊ "အေးလေ ဒါကြောင့် နင်က လွမ်းတာ သတိရတာတွေ ငါဖြစ်နေတာတွေကို ကိုယ်ချင်းမှ မစာတတ်တာ" ပြောရင်း မိနှင်းကငိုသံပါလာတယ်၊
ကျနော်လဲ "ကဲဟေ့ နင်မအိပ်ချင်သေးလဲ ဒီအခန်းထဲမှာ အခွေကြည့်ကြမယ်….ကြည့်မလား" လို့မေးလိုက်တော့ မိနှင်းက ကျနော်အိပ်ခန်းထဲက အခွေသွားရွေးပြီး DVD စက်မှာ ထည့်လို့ ဖွင့်လိုက်တယ်၊ ရီမုဒ်လေး ကိုင်ပြီး ကျနော်က အိပ်ရာပေါ်မှာလှဲရင်း စကြည့်၊ မိနှင်းကလည်း ကျနော်ကုတင်ပေါ်မှာ လာထိုင်ရင်း စကြည့်မိတော့ Drama ကားတွေပဲ ပါတဲ့အခွေ၊ သေပြီ ဟိုခန်းဒီအခန်းတွေက ပါတော့မယ်၊ ကျနော်လဲ သူ့ကို အမြန်ပဲ "ဟဲ့ အဲဒါခလေးကြည့်လို့မရတဲ့ ကားတွေဟ" ပြောမိတော့ မိနှင်းက "ငါက ခလေးမှ မဟုတ်တာ ကြည့်မယ်" လို့ ဆိုလာတော့ ကျနော်လဲ စိတ်ချဉ်ပေါက်သွားပြီး ကြည့်ဟာလို့ ပြောပြီး ခုတင်ပေါ်မှာ ပြောင်းပြန်လှဲ သူထိုင်နေတဲ့နေရာမှာ ခေါင်းအုံးလေးချလို့ စကြည့်တာပေါ့၊ တွေ့ပါပြီ ကားစလို့ ၁၅ မိနစ်ကျော်ရယ်၊ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးရဲ့ အိပ်ရာခန်း၊ သူကလဲ ကျန်နေတဲ့ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးကို ယူပြီး ကျနော်ဘေးမှာ လှဲပြီး ဝမ်းလျားမှောက်လို့ အတူကြည့်နေတော့တာ၊
မိနှင်းတစ်ယောက် မျက်လုံးလေးပြူး သက်ပျင်းလေးတွေချလို့ ကြည့်နေတော့တာလေ၊ ကျနော်လဲ သူ့ကို စကားစလို့ "အဲဒီအခန်းတွေကြောင့် မကြည့်နဲ့လို့ ပြောတာဟ" ပြောလိုက်တော့ သူက "မိုက်တယ်ဟ" တဲ့၊ အခွေက NC-17 ရယ် ကောင်းခန်းတွေက ဆက်တိုက်လာတာ၊ ကြာလာတော့ မိနှင်းတစ်ယောက် မှောက်ခုံကနေ ဘေးတစောင်း လှဲလို့ကြည့်ရင်း ကျနော်ပေါင်ကိုတောင် လာခွထားသေးတာ၊ ကျနော်လဲ ကြည့်ပြီးသားဆိုတော့ အိပ်ချင်လာပြီ၊ မှောက်ခုန်လေးပဲ ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ မျက်စိမှိတ်ထားရင်း အိပ်ပြီပေါ့၊ ကြိုးစားပြီးသာ အိပ်နေတာ ဘေးမှာလူတစ်ယောက်က ရှိနေတော့ နိုးတဝက် အိပ်တဝက်ရယ်၊ မိနှင်းကလဲ ကျနော်ကို အိပ်ပျော်မခံ၊ တော်ကြာ ကိုယ်လုံးကို လက်နဲ့ လာပုတ်လိုက်၊ ခြေထောက်နဲ့ခွလိုက်နဲ့ မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့လဲ ဇာတ်လမ်းကို အကြည့်မပျက်ဘူး
အရက်ကလဲ မူးထား အိပ်ကလဲ အိပ်ချင်နေတော့ လူက အူကြောင်ကြောင်တောင် ဖြစ်လာပြီ၊ ကျနော်လဲ စိတ်တိုလာပြီး "အိပ်တော့မယ်ဟာ" လို့ပြောလိုက်တော့ "အိပ်ပေါ့ ငါလည်းဒီမှာပဲ အိပ်တော့မယ်" ဆိုတော့ မှေးစင်းနေတဲ့ ကျနော်ရဲ့ မျက်လုံးက ပြူးသွားတော့တယ်၊ ကျနော်လဲ ခြေရင်းကနေ ခေါင်းရင်းကို ပြောင်းပြီး အတည့်အိပ်လိုက်တော့ သူကလည်းကျနော်လိုပဲ နေရာလိုက်ပြောင်းပြီး နေရာလိုက်ပြောင်းလို့ ကျနော်ဘေးကို ဝင်ခွေတော့တာ၊ စက်တွေကို ရီမုဒ်နဲ့တောင် ပိတ်လိုက်သေး၊ အခန်းထဲမှာ မှောင်သွားတော့ ကျနော်စိတ်တွေလဲ တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်၊ ဘေးချင်းယှဉ်ပြီး ပူးပူးကပ်ကပ်ဖြစ်နေတာကိုး၊ နောက်တော့ မိနှင်းက ကျနော်ကိုခွလို့ နားရွက်နားကပ်ပြီး "ငါဆာနေတယ်ဟာ" တဲ့၊ "ဟာ ဒီအချိန်ရောက်မှပဲ ဆာရင်လည်း မီးဖိုထဲ သွားစားဟာ အိပ်တော့မယ်" လို့ ကျနော်ကပြန်ပြောလိုက်တော့၊ ကျနော်ကို "ငပိန်း နင်ဒါကြောင့် ရည်းစားတောင် မရတာ နည်းသေး" လို့ပြောရင်း ကျနော်ကိုယ်ပေါ်ကို တက်ခွတော့ပေါ့၊
သွားပြီ၊ ခေါင်းထဲမှာ မီးတွေပွင့်သွားပြီး အသိစိတ်တွေ ပျောက်သွားပြီ၊ အိပ်နေတာကနေ ဝုန်းခနဲထ၊ သူရဲ့ အင်္ကျီကိုချွတ်၊ သူကလဲ ကျနော်အင်္ကျီကို ပြန်ချွတ်၊ နှခမ်းချင်းစနမ်းမိလိုက်တာ၊ ရင်သားတွေအထိပဲ၊ သတိမထားမိလို့ မသိခဲ့တာ မိနှင်းလဲ ပစ္စည်းရှိလူတန်းစားဆိုတာ အခုမှ သိတော့တယ်၊ နောက်တော့ မိနှင်းကို ခုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်ပြီး လုံချည်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ပိပိကို လက်နဲ့ အုပ်ထားသေးတယ်လေ၊ အုပ်ပစေ ကျနော်လဲ သူပေါင်ကြားဝင်ပြီး အုပ်ထားတဲ့ လက်ကို ကျနော်ရဲ့ မာတောင်နေတဲ့ လိင်တံနဲ့ ထိုးပေးလိုက်တာ မိနှင်းလက်က လိင်တံကို ကိုင်ပြီး ပိပိအဝကို တေ့ပေးရရောလေ၊ စိုရွှဲနေတဲ့ ပိပိထဲက အရည်တွေက အပြင်ကိုတောင် စိမ့်ထွက်နေတာ၊ ခလေးမမွေးဖူးသေးတဲ့ ပိပိ၊ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ အကြိမ်ရည် နည်းသေးတဲ့ ပိပိ အဝကျဉ်းလို့ စီးပြီးကျပ်နေတုန်းပဲ၊
ကျနော်တို့နှစ်ဦး ဘာစကားမှ မပြောမိကြပဲ လိင်ကိစ္စကို အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်နေတာကြတာ၊ ကျနော်ကလည်း အရက်မူးနေလို့ထင်တယ် တော်တော်နဲ့ မပြီးနိုင်၊ မိနှင်းလည်းပိပိထဲ အရည်တွေ ခဏခဏ ကျနေပုံပေါ်တယ်၊ ကြာလာတော့ လိက်တံကို အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက်တိုင်း တဗွတ်ဗွတ်နဲ့ အိပ်ခန်းထဲ့ အသံတွေ ညံနေတော့တာပေါ့၊ မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာတော့ ကျနော်လဲ ဆီးကျောတွေ တောင့်တင်းလာပြီး ပြီးချင်သလိုလို ဖြစ်လာတော့ လုပ်နေတဲ့ အရှိန်ကို မြှင့်တင်လိုက်တော့ ဆီးခုန်နှစ်ခု ထိရိုက်တဲ့ အသံက တဖတ်ဖတ်နဲ့ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာတော့တာပေါ့၊ ပတ်လက်လှန်ပြီး အောက်ကရှိနေတဲ့ မိနှင်းရင် နို့နှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲလို့ အားယူရင်း လိင်တံကို တစ်ဆုံးဝင်အောင် ဆောင့်ချပြီးသွင်းနေလိုက်၊ မိနှင်းဆီကလဲ ညီးသံတွေ ထွက်လာနေပြီ၊ အသံကိုကြားရတဲ့ ကျနော်လဲ ဖီးလ်တွေ ပိုတက်လာလို့ သုတ်ရည်တွေကို စတင် ပန်းထုတ်မိတော့တာ၊
လိင်တံကို ပိပိထဲ တစ်ဆုံးဆောင့်သွင်း ဆီးခုန်းနှစ်ခုကို ဖိကပ်ထားပြီး လိင်တံထိပ်ခေါင်းက မိနှင်းရဲ့ သားအိပ်ခေါင်းထိပ်ကို တေ့လို့ ကျနော်ရဲ့ သုတ်ရည်တွေကို အားနဲ့ ညှစ်ထုတ်လို့ ပစ်သွင်းနေတော့တာလေ၊ သုန်ရည်တွေ ထွက်နေတုန်းမှာပဲ ကျနော်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က မိနှင်းပေါ် မှောက်ချလိုက်တော့ မိနှင်းလဲ ကျနော်ကို အလိုက်သင့် ပြန်ဖက်ပေးထားတာပေါ့၊ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ သုတ်ရည် တစ်စက်အထိ မိနှင်းရဲ့ ပိပိထဲကို ဝင်ရောက်သွားပြီးမှ ကျနော်လဲ အာကုန်သွားလို့ လိင်တံကို ပိပိထဲက ထုတ်ပြီး ဘေးကိုလှဲချမိလိုက်တော့တယ်လေ၊ ကျနော်လဲ အမောဖြေနေတုန်း မိနှင်းဆီက အသံစထွက် လာတော့တယ် "ကောင်းလိုက်တာဟယ်….နင်အဲဒီလောက် အကြာကြီးလုပ်နိုင်တာ အခုမှ အယားပြေ အဆာပြေသွားတော့တယ်" လို့ပြောရင်း ကျနော်ရဲ့ ပါးကိုနမ်းတယ်လေ၊ ကျနော်လဲ အစရှိအနောင်နောင်ဆိုတော့ နောက်တစ်ချီလောက် ထပ်ဆွဲဖို့ ခဏ အနားယူရင်း ကျနော်တို့ နှစ်ဦးစကားတွေ ပြောနေကြတာပေါ့၊
"နင်နဲ့ငါ အခုအချိန်က စပြီး မရီးနဲ့မတ် ဆိုတဲ့ တော်စပ်နေတာတွေ မေ့လိုက်တော့ဟာ" လို့ မိနှင်းက စပြောလာတယ်၊ "ငါ့ယောင်္ကျားက လိင်ဆက်ဆံနင့်လောက် အင်နဲ့အားနဲ့ မလုပ်နိုင်ဘူးဟ….ပြီးတော့လဲ ၁၀ ချက်လောက်လုပ်ပြီးသွားရင် သုတ်ရည်ထွက်လို့ ပြီးသွားတတ်တော့ ငါ့မှာ တန်းလန်းကြီး ဖြစ်ကျန်နေခဲ့ရတာ အမြဲတမ်းပဲ….နင်အကိုကလဲ ရိုးချက်ဟာ လိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ ငါရဲ့ ပိပိထဲ သူလိင်တံထည့်ပြီး လုပ်တာလောက်ပဲ သိတယ်….. တစ်ခြားနည်းလမ်းတွေ မသိတော့ဘူးထင်တယ်" လို့ ပြောနေတော့၊ ကျနော်လဲ မိနှင်းတစ်ယောက် ဘာဂျာတောင် အမှုတ်ခံရဘူးရဲ့လားမသိဘူး လို့ တွေးနေမိတယ်၊ "တို့လင်မယားလဲ နှစ်လလောက်တွေ့ရတာ သူပြန်ထွက်သွားရင် ငါအရမ်းဒုက္ခရောက်တာဟဲ့…. သူလုပ်ပုံက ငါ့ကို ဆွသွားသလို ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီး တို့လို့တန်းလန်းနဲ့ ၆ လလောက် ပြန်စောင့်နေရတာ ကြာတယ်ဟာ"
"ကဲ နင်ချည်းပဲ စကားတွေပြောနေတော့တာပဲ သန့်ရှင်းရေးသွားလုပ်မယ် လာခဲ့" လို့ကျနော်ကပြောပြီး အိမ်ရာပေါ်ကနေ ဆွဲချလိုက်တော့ နှစ်ယောက်သား ကိုယ်တုံးလုံးလေးနဲ့ ရေချိုးခန်းကို ရောက်လာရော၊ ရေချိုးခန်း မီးရောင်အောက်ရောက်မှ ကြည့်မိတာ မိနှင်းရဲ့ အတွင်းသားတွေ အတော်ဖြူဝင်းတာပဲ၊ လုံးကြီးပေါက်လှ မဟုတ်ပေမယ့် သူဟာနဲ့သူ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ တည်ရှိနေတာပေါ့၊ ပိပိကို မိနှင်းတစ်ယောက် ရေဆေးနေတုန်းမှာ "နင့်သုတ်ရည်တွေ ပိပိထဲက ပြန်ထွက်တာ အများကြီးပဲ နှမြောစရာကြီး" လို့ပြောတော့ ကျနော်လဲ ရှူရှူးပေါက်နေရင်း မျက်နှာကို သူဖက်လှည့်လို့ "ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်" လို့ ပြောမိတာပေါ့၊ နှစ်ဦးသား သန့်ရှင်းရေးလုပ်လို့ ပြီးတော့ အိပ်ရာပေါ်ပြန်ရောက်လာပြီး မိနှင်းကို ပက်လက်လှဲခိုင်းလိုက်ပြီး ကျနော်က သူ့အပေါ်ကနေ ခွတက်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ နှခမ်းချင်း ပြန်စနမ်းတော့တာပေါ့၊
နောက်တော့ လည်ပင်းနဲ့ ရင်သားတွေဆီရောက်သွားရော၊ ရင်သားတွေက ၃၃ လောက်ရှိပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတစ်ဖက်က အထဲကိုတောင် ဝင်နေတယ်၊ ကျနော်လဲ ဝင်နေတဲ့ဖက်ကို စုပ်ဆွဲလိုက်တာ နို့သီးခေါင်းက ထွက်လာတော့တယ်၊ နို့သီးခေါင်းနဲ့ ရင်သားနှစ်ဖက်လုံးကို နေရာလပ်မကျန် လျှာနဲ့နမ်းပေးနေမိတာ မိနှင်းတစ်ယောက် မျက်စိတွေမှိတ်ပြီး ဇိမ်ခံနေတော့တာ၊ ဝမ်းဗိုက်သားတွေကို လျှာနဲ့ပွတ်ဆွဲသွားတော့ ယားလို့ထင်တယ် ဗိုက်သားတွေလှုပ်နေတယ်၊ မိနှင်းရဲ့ ဆီးခုန်မွှေးတွေက မထူမပါးနဲ့ ပေါင်ကို ကားလိုက်ပြီး ပိပိကို လျှာနဲ့စလျှက်လိုက်တော့ မိနှင်းတစ်ယောက် "ဟဲ့ မလုပ်နဲ့လေ" လို့သာ အသံထွက်လာ ခန္ဓာကိုယ်က မရုန်း၊ ပိပိမှာ ဆပ်ပြာနံ့လေးက မွှေးနေတော့တာပေါ့၊ အမွှေးတွေကို ဖယ်ပြီး ပိပိကို အုပ်နေတဲ့ ကြွက်နားရွက် နှစ်ခုကို ဘေးရောက်အောင် လျှာနဲ့ ထိုးဖယ်လိုက်ပြီး အစိနဲ့ ပိပိအတွင်းထဲကို ကောင်းကောင်းမွှေပေးလိုက်တာ မိနှင်းတစ်ယောက် ခေါင်းကိုမော့လို့ ပါးစပ်ကိုဟလို့ အရမ်းကောင်းနေတဲ့ ပုံစံမျိုး၊
မိနှင်းတစ်ယောက် လက်တွေက သူ့ရင်သားတွေကို ပြန်ပြီးပွတ်လိုက် ညှစ်လိုက်နဲ့ ဖြစ်နေပြီ၊ ကျနော်လဲ အစိကို လျှာနဲ့လျှက်ပေးနေရင်း မိနှင်းဖင်ကြီးက ကော့တက်လာတော့ ဖင်လုံးတွေကို လက်နဲ့ ညှစ်ပေးလိုက် ဖင်ကြားထဲကို လက်ညှိုးနဲ့ ပွတ်လိုက် ဖင်ဝကိုဆွပေးလိုက်နဲ့ မိနှင်းရဲ့ ခါးက မွေ့ယာကနေ မြောက်တက်နေပြီး တစ်ခါတလေ မိနှင်းလက်က ကျနော်ဆံပင်ကို လက်ကဆွဲဖိလို့ ပိပိထဲကို ကျနော်ခေါင်းထိုးသွင်းနေတဲ့ ပုံစံ၊ ပိပိထဲကနေ အရည်တွေက အဝကနေ တစ်ပွက်ပွက်နဲ့ တောက်လျှောက် ထွက်ကျနေတာ ဖင်ဝတွေတောင် စိုရွှဲလာခဲ့ပြီ၊ ကြာလာတော့ မိနှင်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ သီးမခံနိုင်တော့ပဲ၊ အိပ်ရာပေါ်ကနေ လူးလဲထလိုက်ပြီး ကျနော်လိင်တံကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့်လို့ အားပါးတရလွေတော့တာ၊ ကျနော်လိင်တံလဲ မာတောင်ပြီး ပြောင်တင်းလာတဲ့ အချိန်ရောက်တော့ "နင့်ဟာကြီး ငါ့ပိပိထဲ ထည့်ပြီး အသားကုန် ဆောင့်ပေးတော့ဟာ….ငါ့ပိပိထဲမှာ အရမ်းယားနေပြီ" တဲ့၊
ကျနော်နောက်တစ်ကြိမ် သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆိုင်ကယ်စီးလို့ ကိုင်လို့ ကားထားပြီး ပိပိထဲကို လိင်တံထည့်လို့ ဆောင့်တော့တာပေါ့၊ အားမရသလို ဖြစ်မိတော့ ခြေနှစ်ချောင်းကို ရင်ဘတ်မှာကပ် ကျနော်ကိုယ်လုံးကို ရှေ့ကိုကိုင်းလိုက်ပြီး မိနှင်းရဲ့ ပုခုန်းကိုဆွဲလို့ ဆောင့်တော့တာ၊ တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း မိနှင်းလဲ ဖီးလ်တွေတက်တဲ့ အသံနဲ့ ငြီးငြူနေရပြီလေ၊ ကျနော်လိင်တံ မိနှင်းရဲ့ ပိပိထဲရောက်မှာ တဆက်ဆက်နဲ့ အညှစ်ခံနေရတာ နှစ်ခါလောက်ရှိပြီ၊ ထုံးစံအတိုင်း အရည်တွေက အထွက်များလို့ လိင်တံအရင်း ကျနော်ရဲ့ အမွှေးတွေမှာတောင် အဖြူရောင် အရည်တွေက အခဲလိုက်ကပ်နေတော့တာ၊ သူ့ကိုလုပ်နေတာ မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာတော့ မိနှင်းက "ပြီးလိုက်တော့ဟာ ပိပိထဲကို သုတ်ရည်တွေထည့်ပေးတော့….ငါတော့ဘယ်နှစ်ခါကျသွားမှန်း မသိတော့ဘူး အားကုန်ချင်လာပြီ" လို့ ပြောတော့တာလေ၊
ဒါနဲ့ပဲ ကျနော်လဲ ရင်ဘတ်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ခြေနှစ်ချောင်းထဲက တစ်ချောင်းကို အောက်ချလို့ခွလိုက်တော့ မိနှင်းလည်း ဘေးတိုက်လေးဖြစ်သွားပြီး ကျနော်လက်တစ်ဖက်က မိနှင်းရဲ့ နို့တစ်ဖက်က ဆွဲလို့ မိုင်ကုန်ဆောင့်တော့တာ နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်ပဲကြာတယ် သုတ်ရည်တွေ အများကြီး ပန်းထွက်လို့ ပြီးသွားပြန်ရော၊ မိနှင်းလဲမော ကျနော်လည်းအားကုန်သွားပြီ၊ အချိန်ကလဲနောက်နေ့ကူးသွားလို့ မနက် ၃ နာရီထိုးပြီ၊ ကျနော်တို့နှစ်ဦး အဝတ်အစားတွေတောင် ပြန်မဝတ်နိုင်တော့ပဲ အတူဖက်လို့အိပ်လိုက်ကြတော့တာ၊ မနက် ၁၀ နာရီလောက်မှပဲ နိုးတော့တယ်လေ၊
မနက်အိပ်ရာကနိုးတော့ ခပ်သွက်သွက်လေး တစ်ချီလောက် ဆွဲဖြစ်လိုက်သေးတာ၊ လုပ်နေတုန်းမိနှင်းက ခဏရပ်ခိုင်းပြီး "နင့်အတွက် ငါ့ အချိန်ပြည့်ရှိနေသလို ငါ့အတွက်လဲ နင်ကွက်လပ်တွေ ဖြည့်ပေးပါ၊ နင့်အကို ပြန်လာရင်တော့ ခဏလေး သီးခံပြီး စောင့်ပေးပေါ့… ဒါပေမယ့် လစ်ရင်တွေ့ကြမယ်…. နင်နဲ့ငါ့ကြားမှာ တော်စပ်နေတဲ့ မရီးနဲ့ မတ် ဆိုတဲ့ဟာတွေ မေ့လိုက်တော့…. နင်မိန်းမ မယူသေးခင်အချိန်အထိ နင်နဲ့ငါဟာ အကောင်းဆုံး sex partner တွေလိုနေကြမယ်" သဘောတူညီချက်တွေ ယူတော့တာ၊ ကျနော်က ဘာပြောစရာရှိမှာလဲ "အေးပါဟာ" လို့ပြောရင်း လုပ်နေတာကို စိတ်တွေလျှော့ချလိုက်ပြီး မြန်မြန်ပြီးအောင် လုပ်လိုက်တော့တယ်၊
အဲဒီနေ့ အဲဒီအချိန်ကစလို့ မိနှင်းနဲ့ ကျနော်ဟာ အားတိုင်းလုပ် ယားတိုင်းလုပ်ဖြစ်ကြတာ၊ အကိုပြန်ရောက်နေတဲ့ အချိန်တောင် လစ်ရင်လစ်သလိုဆွဲ၊ မီးဖိုခန်းလဲ မရှောင်၊ ထမင်းစားပွဲလည်း ညှောင့်စင်လုပ်၊ တစ်ခါတစ်လေ အိပ်ခန်းတွေကြားက လူသွားလမ်းမှာတောင် မိနှင်းက လစ်ရင်လွေပေးတတ်တယ်၊ အကိုပြန်လာပြီး နှစ်လလောက်ရန်ကုန်မှာ နေသွားတာ သင်္ဘောပြန်ထွက်တော့ မိနှင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရနေတာကို အကိုတစ်ယောက် သိသွားတော့ ဝမ်းသာသွားပြီး ကျနော်ကိုဂရုစိုက်ပေးဖို့ မှာနေပြီး ခလေးမွေးခါနီးရင် သူ့ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောခဲ့တာပေါ့၊ အကိုတစ်ယောက် လေယာဉ်ပေါ်တက်သွားပြီး အပြန်လမ်းမှာ မိနှင်းကို ကျနော်က "ဟဲ့ ကိုယ်ဝန်က ဘယ်နှလရှိနေပြီလဲ" လို့ မေးလိုက်တော့ " ၂ လ ကျော်နေပြီ….နင့်ဟာလေးလေ" မိနှင်းက ပြောရင်း ကားပေါ်မှာ ကျနော်လက်ကို ကိုင်ထားတာပေါ့၊
မိနှင်းတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်ရနေပြီဆိုတဲ့ အသိတွေနဲ့များ လိင်စိတ်တွေ ပိုကြွနေလားမသိ၊ အခုနောက်ပိုင်း လိင်ကိစ္စမှာ သူကပဲ ဦးဆောင်နေတော့တာ၊ ကျနော်အခန်းထဲ လာပြီး အပြာကားတွေကြည့်လိုက် လုပ်လိုက်နဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်တွေ ဖြည့်ပေးနေရတာ၊ ကြာလာတော့ ကျနော် အစ်ကိုကိုတောင် စိတ်မှာ မှန်းလို့ အားနာလာရတယ်၊ သူ့အတွက်ရှာပြီး ပေးစားခဲ့တဲ့ မိန်းမက ကျနော်အတွက်ပဲ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ၊ မိနှင်းကိုယ်တိုင်လဲ ကျနော်ကို သူယောင်္ကျား တစ်ယောက်လိုပဲ ဆက်ဆံနေတော့တယ်၊ ကျနော်ကိုလဲ တစ်ခါတလေ "နင်မိန်းမ မယူနဲ့တော့ဟာ….ငါဝေပြီးမစားချင်တော့ဘူး" လို့ပြောတော့ ကျနော်လဲ ရယ်ချင်သွားပြီး "နင်ကြတော့ရောလို့" ပြန်ပြောလိုက်တော့ ရယ်ကျဲကျဲလုပ်နေပြီး "တစ်နှစ်မှာ ၂ လ ၃ လ လောက်ပဲ နင်နဲ့အတူ မအိပ်တာပါဟာ….ကျန်တဲ့ အချိန်တွေမှာ နင့်ဟာက ငါအထဲမှာ အမြဲဝင်နေတာပဲဟာ" လို့ပြောရင်း ကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတုန်းပေါ့လေ၊
Posted by bluegyi at 00:11